Xisbiga Dhexe oo ka hor yimid fikir uu qaatay xisbiga Mudaraatka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiga Dhexe oo ka hor yimid fikir uu qaatay xisbiga Mudaraatka
La daabacay tisdag 5 mars 2013 kl 11.19
Sawirle: Hannes Ewehag/Sveriges Radio.
Xisbiga Mudaraatka ayaan taageero kaga helin xisbiyada ey xulufada ku yihiin talada dalka fikirkiisii is-rogga ahaa ee la xiriiray in aan maamullada degmooyinka lagu khasbin sidii ey u suurtagelin lahaayeen doorasho madax-bannaan ee nidaamka hab-nolol-wadaagga.
War-bixin uu dhowaantan soo ban-dhigay xisbiga Mudaraatka ayaa lagu sheegay in xisbigu ka laabtay fikirkiisii ahaa ku khasbidda maamullada degmooyinka iney ogolaadaan abuuritaanka shirkaddo madax bannaan ee adeegga kala doorashada xorta ah ee dar-yeelka hab-nolol-wanaagga. Middaasina oo ah tallaabo dib looga qaadey heshiis ey u dhammaayeen afarta xisbi ee talada dalka ku bahoobey, sida ay qabto Annie Lööf, hogaamiyaha xisbiga Dhexe (C).
- Waxaan qabaa inay tahay mid laga xumaado in xisbiga Mudaraatku uu go'aankaa qaatay. Aniga xisbi ahaan waxaa muhiimad ballaaran iigu fadhida habka kala doorashada xorta ah ee meel walba ee shakhsigu dalka kaga sugan yahay, sida ay sheegtay.
Maxaad uga xun tahay middaa?
- Dhan waa mid aan heshiis guud ku wada gaarney in shakhsi walba uu helo xoriyad madax-bannaani ee wax kala doorasho meel walba ee uu dalka kaga sugan yahay, waa fikir aan ku doorasho galney anigana xisbi dhexe ahaan waannu ku taagan-ahey.
Xisbiga Kristendimoqoraadiga (Kd) hogaamiyihiisa Göran Hägglund ayaa shalayto sidoo kale ka soo hor-jeestay go'aanka xisbiga Mudaraatka ee is-bedelka mabda'a lagu magacaabo LOV - lagen om valfrihet - xeerka kala doorashada xorta ah iyo in degmooyinka aan ku tallaabsan khasab looga dhigo, halka ey maanta tallaabadaasi oo kale qaadeen xisbiyada Dhexe (C) iyo shacabka (Fp).
Anna Kinberg Batra, kana mid ah hogaamiyeyaasha kooxo-hoowleedka xisbiga Mudaraatka ayaa sheegtay in muhiimmaddu tahay in culeeyska la saaro sidii loo gaari lahaa habka ugu wanaagsan ee nidaamka hab-nolol-wanaagga ee muhiimmaddu aaney aheyn cidda mulkida u leh.
Hase yeeshee Nina Larsson, xog-hayaha xisbiga Shacabka Fp, ay sheegtay in aanay middaa ku raacsanayn.
- Midda ugu muhiim-sani waxay tahay in bulshadu dareento awoodda ey u leeyihiin masuuliyadda noloshooda, sidoo kale waxaan qabaa muhiimmada ey ku fadhido in la helo kala-doorashada shirkadaha ku howl-galaa adeegyadaa, sida ay sheegtay.
Nina Larsson ayaa sidoo dhaleeceeyn u soo jeedisay in aannu xibiga Mudaraatku ka war-dhoowrin baaritaan ay dawladdu howshaa u xil-saartay iyo in loo baahan yahay xeer ku khasbaya maamullada degmooyinka iney sahlaan abuuritaanka kala doorashada ee shirkadaha madaxa bannaan. Sida xaaladdu iminka tahay kala bar degmooyinka dalku ka kooban yahay ayaa ku tallaabsadey sidii ey howshaa ku xir-gelin lahaayeen.
In kasta oo uu siyaasaddaa iminka ka hor yimid xisbiga Mudaraatka ee ah xisbiga ugu dhumucda ballaaran ee xisbiyada gacanta ku haya awoodda dalka ayay qabtaa Annie Lööf, xogaamiyaha xisbiga Dhexe in siyaasaddani ugu dambeeyn noqon doonto mid la hir-geliyo.
- Xisbiyada isu-tagga Iswiidhen ayaa ku doorasho galey baaqa ah xoriyadda kala doorashada ee dhammaan degmooyinka dalka, waana fikir aan xisbiyada garabka midig taageer-sannaahy, sida ay sheegtay.